Zoos any Norvezy
Ny faritra avaratr'i Norvezy dia nosasana ny Oseana Atlantika, ary ny tendrombohitra maro dia rakotra ala matevina - ireo fepetra tena tsara ho an'ny fiainan'ny biby isan-karazany, tsy lazaina amin'ny mponina marenina izay mipetraka akaikin'ny morontsirak'i Norvezy.
Inona avy ireo zoos any Norvezy?
Misy zo zôfa maromaro ao amin'ny firenena izay hampiseho ireo mpizahatany amin'ireo solontenan'ny biby fiompy, tsy avy any Norvezy fotsiny, fa avy any Eoropa avaratra ihany:
The Zoo Polar. Io no avaratra indrindra indrindra eran-tany, ary ankoatra izany dia malaza amin'ny faritra midadasika misy azy ny isan'ny mponina ao. Ao amin'ny "Zoo Polar Zoo" dia ao amin'ny toeram-ponenana voajanahary ny biby, ary ny sasany amin'izy ireo dia mifanerasera sy mifandray malalaka amin'ny mpitsidika. Noho izany, ny Polar Zoo dia toerana lehibe hijerena ny fiainan'ny biby an-tanety amin'ny lavitra lavitra: alika, amboadia, bera, amboadia, moose, omby mozika ary ny hafa.
Kristiansand Park. Ity dia vala iray, izay natao tamin'ny endriky ny tanàna matanjaka ao Cardamon. Ampitahaina amin'ny Disneyland. Ny mpitsidika dia mifankahalala amin'ny biby rehefa mandeha sambo lehibe, lalana mahaliana mankany amin'ny tanànan'i Karaiba na mandeha lavitra ao amin'ny valan-tseranana. Misy zavatra mahaliana sy fialam-boly ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ny valan-javaboary dia ilay zoo malaza indrindra any Norvezy ary marika malaza any amin'ny firenena.
Park of Bears. Located in the municipality of Flo, 120 km from Oslo . Na eo aza ny anarana, ao Bjorneparken, ankoatra ny karazan-kazo maromaro, ny biby hafa dia misolo tena: moose, lynx, llamas, amboadia. Ao amin'ny faritry ny valan-javaboary dia misy tranombakoka misy biby mahaliana, izay ahafahanao mianatra momba biby maro.
Valan-javaboahary any Oslo. Ny zoo metropolitan dia ahitana karazana biby an-jatony maro, anisan'izany ny: zanga, sokatra, tanalahy, boas, katsatsaka ary biby mandady hafa. Isaky ny Talata dia afaka mahita ny biby ny mpitsidika. Ity horonantsary ity dia tsy natao ho an'ny reradreraka, satria omena sakafo mivelona ny mponina. Mahagaga fa telo isaky ny mpiasa an-tsitrapo sy mpilatsaka an-tsitrapo dimy no karakarainy.
Zoo kely ao Sunderbe. Toerana mahagaga ny Zoo Little. Maro ny mponina ao amin'ny tontolo voajanahary, ary ny mpitsidika mandehandeha manodidina ny vala ao an-tanàna. Ireo mpizahatany dia afaka mifindra monina manodidina ny vala, manangona biby mandady tsy misy alikaola, gidro, lolo, ankizy ary biby hafa. Ny biby mandady lehibe dia ao anaty aquarium, anisan'izany ny: voay, bibilava, androngo.
Mini-Zoo ao Tromso . Iray amin'ireo zoos kely indrindra any Norvezy. Azo atao izany amin'ny alàlan'ny ora iray, ka rehefa miala aloha dia mendrika hijery ny Zoo Tromso Mini. Misy peacocks, llamas, karazana artiodactyl maro ary lay misy trano misy lolo.
Haugaland Zoo. NC Ben'ny tanàna NC Firenena Flag of France.svg Frantsa Faritany Midi-Pyrénées Ity dia zozoro kely, izay tena toy ny zaridaina iray: maro ireo làlan-dàlana, misy taratra sy tetezana, mamela ireo mpitsidika mandingana manodidina ny faritry ny iray manontolo. Any anaty vala ny sokatra, ny aotirisy, ny lemurs, ny kansera, ny vorombola, ny mongooses ary ny biby maro hafa. Maro no mandeha an-tongotra malalaka manerana ny faritany ary vonona ny hifandray amin'ny mpizaha tany, ary biby lehibe dia any amin'ny trano malalaka.
Aquariums of Norway
Oceanariums sy aquariums, izay ahitanao ny mponin'ny ranomasina any avaratra, dia tsy mahaliana loatra:
Atlantic Aquarium. Ao amin'ny tanànan'i Alesund , any amoron-dranomasina no misy azy. Ny singa fototra ao amin'ny Olaimpikan-dranomasina Atlantika dia ny ankamaroan'ireo mponina ao aminy dia afaka hokasihin-tanana, ohatra, miala amin'ny sisin'ny kobaka ary mamelona azy ireo. Isan'andro amin'ny 13:00, ny fikarakarana ny trondro ataon'ny mpitaingin-tsoavaly dia tena fampisehoana. Vondron'ny halibut, cod, doroala ary trondro hafa manodidina ny mpitaingin-tsoavaly ho fiandrasana sakafo.
Ilay Aquarium ao Bergen. Ny Bergen Aquarium dia manana fanangonana manan-karena indrindra amin'ireo mponina an-dranomasina any Eoropa. Ny rano ho an'ny aquarium dia nalaina avy amin'ny 130 m mahery, izay mamela ny trondro tsy hoe hiaina ao anaty vala, fa koa mba hahomby amin'ny famokarana. Eo amin'ny fidirana amin'ny mpitsidika "hihaona" pingouins sy tombo-kase. Ireo biby mahatsikaiky ireo dia manatsara ny toetran'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ao amin'ny Aquarium dia misy tranom-bakoka ahitana sarimihetsika momba ny fiainan'ny biby anaty rano, ary koa ny anjara asan'ny ranomasina amin'ny fiainan'ny olona. Eto ianao dia hianatra fa ny sokatra dia afaka miaina amin'ny lamosiny, ary ny habetsaky ny plastika izay miditra ao anaty ranomasina dia mamorona loko azo oharina amin'ny haben'ny firenena sasany.
Ny aquarium ao Drebak. Drøbak Akvarium dia manana fahafahana handinika ireo mponin'ny Oslo Fjord , ary manodidina ny 100 karazana mponina an-dranomasina izany. Izy ireo dia mipetraka ao amin'ny 25 aquariums sy dobo filomanosana. Ity toerana ity dia tia ny Norveziana, satria ao Drebak no misy ny tranombakoka ny lovan'ny Krismasy malaza any an-toerana - "Lutefisk". Eto koa dia afaka manandrana.
Lofoten aquarium. Mipetraka ao amin'ny Kabelvog ary fantatra amin'ny hoe sombiny lehibe amin'ny ranomasimbe sy ny morontsiraka. Ireo mpizahatany dia liana hahitana ny tenany ao anaty ranomasina ary mahita trondro tsy mahazatra. Misaotra ny jiro, mahita ny trondro ary manjono ny trondro vaventy. Ao amin'ny vilany dia misy tombo-kase sy tombo-kase, izay faly mifandray amin'ny mpitsidika.
Sognefjord Oceanarium ao Balestrand. Matetika ny mpianatra norvezianina no voatsidika azy. Ny oceanarium koa dia misokatra ho an'ireo mpizaha tany izay afaka mianatra bebe kokoa momba ny fiainan'ny fiaramanidina amin'ny fandalinana ny endriky ny biby fiompy sy ny tontolo iainana.
Ny Aquarium ao Risora. Ity toerana ity dia fantatra ho an'ny mponiny, misy trondro sy trondro tsara tarehy tranainy, izay azonao jerena. Misy ihany koa ny famelabelarana kely sy ny trano fampirantiana, izay ahitan'ny mpitsidika zavatra mahaliana momba ny mponin'ny Aquarium. Ary any an-trano dia misy fampiratiana, maneho amin'ny inona ny fitaovana ampiasaina amin'ny mpanjono amin'ny fotoana samihafa.
Repoblika Repoblika Tseky
Inona no havoaka avy any Estonia?
Ny lovantsofin'i Andorra
Inona no hitranga avy any Soisa?
Montenegro na Kroasia - inona no tsara kokoa?
Fialan-tsasatra miaraka amin'ireo ankizy any Albania
Feno any amin'ny Repoblika Tseky
Zavatra mahaliana momba an'i Belzika
Ahoana no hifehezana ny volo eo amin'ny vy?
Popcorn - votoatin'ny kaloria
10 kilalao mampidi-doza indrindra tokony ho fantatry ny ray aman-dreny
Toeram-ponenana ho an'ny olon-dehibe
Ankizy Jennifer Lopez
Voarara ny fifamoivoizana
Fanafody volo ho an'ny fitomboan'ny volo
Ny zana-kavoana indrindra amin'ny alika
Vondron'ny ran'ny zaza
Sisley - fanangonana vaovao amin'ny lohataona 2013
Veigela - fambolena sy fiahiana
Ny Los Angeles Music Awards dia natao tany Los Angeles
Inona no atao hoe aspirine ho an'ny fatiantoka mavesatra?
Tranom-pifanarahana amin'ny akanjon'ny ankizy amin'ny taona